Nhau -Kuenzanisa maitiro ekuchengetedza crane
Kuenzanisa maitiro ekuchengetedza crane
Nheyo yebalance crane
Nheyo ye "balance crane" inyaya.Huremu hunorema hwakarembera pahoko yebharanzi crane, yakabatwa neruoko, inogona kufamba pakuda mufurati uye mukati mehurefu hwekusimudza, uye bhatani remagetsi switch yekudhonza lift inoiswa pahoko kuita kuti huremu hunorema husimuke. injini uye kutapurirana.
Mushandisi anobata pendant neruoko rumwe, uye anoshandura pendant kusimudza, kutenderera uye kufamba sezvaanoda, sekunge ruoko rwakakurisa, runoshandiswa zvakasununguka.Zvechokwadi, kuchine simba shoma riri muruoko, iro rinounzwa nedzidziso uye chaiyo isina kukwana.Semuenzaniso, maitiro, kukanganisa kwekuisa, kuvepo chaiko kwe deformation uye chigaro chakadzama kunofanirwa kuve uye zvichingodaro.
Kushanda kwebharanzi crane
Thebalance craneinonyanya kuumbwa nekoramu, musoro furemu, ruoko uye chikamu chekutumira, chine compact chimiro uye yakanaka chimiro.
Kuenzanisa crane ne "chiyero chegiravhiti" inoita kuti kufamba kuve nyore, kushanda-kuchengetedza kushanda, kuri nyore uye kunyanya kuchinjika kuti kuve nekugarobata kubata, kusangana kweiyo post process, kunogona kuderedza zvakanyanya kuwanda kwevashandi, kuvandudza kushanda zvakanaka.
Thebalance craneinoita kuti gungano rive nyore uye rikurumidze, kumira kwacho kuri kwechokwadi, zvinhu zviri munzvimbo ine mativi matatu-yakaturikwa mukati meiyo yakarongwa sitiroko, uye zvinhu zvinogona kutenderedzwa kumusoro nekudzika, kuruboshwe uye kurudyi nemaoko.
Ese mabhatani ekudzora anonangidzirwa pamubato wekutonga, uye chibatiso chekushanda chinosanganiswa neiyo workpiece zvinhu kuburikidza nekugadzirisa.Saka chero bedzi iwe uchifambisa mubato, iyo workpiece material inogona kufamba nayo.